ရန်ကုန် | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
ရန်ကုန် ရှိ မှ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
Chinese Translator Male/Female (1) Post
ဘွဲ့ရ ၊တရုတ်ကျောင်း (၉)တန်းအောင် ၊ China Order တင်ခြင်း ၊ China နှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ ၊Complain များဖြေရှင်းရန်
ဘွဲ့ရ ၊တရုတ်ကျောင်း (၉)တန်းအောင် ၊ China Order တင်ခြင်း ၊ China နှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ ၊Com ...
A.G.T.I / B.E / B. Tech လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိသူ ဉီးစားပေးမည်
A.G.T.I / B.E / B. Tech လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း ...
Product Development Executive (Amara Communications, Ananda 4G+)
To contribute to the development of the product market strategy, define new product requirements, and drive new product development to grow products in-line with Ananda 4G+’ business goals.
To contribute to the development of the product market strategy, define new product requirements ...
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ ကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။